Igbo, Romans, Lesson 043 -- In Christ, Man is Delivered from Sin, Death, and Condemnation (Romans 8:1-11) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 043 (In Christ, Man is Delivered)
D - Iwu Nke Chineke N’echebe Anyi Site N’ike Nke Mmehie (Ndi Rom 6:1 - 8:27)
6. Na Kraịst, a napụtara mmadụ n’aka mmehie, ọnwụ, na mba ikpe (Ndi Rom 8:1-11)
NDI ROM 8:9-11
9 Ma unu onwe-unu anọghi n’anu-aru, kama n’ime Mọ Nsọ, ma ọ buru na Mọ nke Chineke bi n’ime unu. Ugbu a ọ bụrụ na onye ọ bụla enweghị mmụọ nke Kraist, abụghị nke Ya. 10 Ma ọ buru na Kraist nọ n’ime gi, aru ahu nwuru anwu n’ihi nmehie, ma Mọ bu ndu n’ihi ezi omume. 11 Ma ọ buru na Mọ nke Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie n’ime unu, Onye mere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilite n’enye gi aru site na Mo Nso nke bi n’ime unu.
Pol gbara ama ndi kwere ekwe nọ na Rom na ebe nile na Mụọ Nsọ Chineke meriri anụ umengwụ ha na obi ọjọọ ha, n'ihi na e doziri ndụ ha n'ike na ebumnobi nke Mmụọ Nsọ. Ya mere, o kere ha, mee ka amụrụ ha ọzọ, too eto, debe ha, kasie ha obi, mee ka ha guzosie ike, mee ka ha jupụta n'ịhụnanya Chineke, kpalie ha ije ozi dị iche iche, ma wusie ha ike ịrụ ọrụ ndị a. Onye kwere ekwe niile nwere obi uto na Mọ Nsọ bi n’ime ya.
Ma onye n’enweghi Mo Nso bi n’ime obi ya abughi onye nke Kraist, obu ezie na amuwo ya site na onye Kristian, n’ihi na aha a putara “onye etere Mo nke Chineke”. Dika otitebere Kraist n’onwe ya oke na Mo nke Nna ya, otua ka onye kwere ekwe. Onweghi aha, ebe omumu a, ma obu mmeme nke baptism, ma obu ugwo a na anata ego ndi nzuko uka puru ime ka i buru onye Kristian. Ọ bụ naanị site n'ike nke Onye-nwe, nke bi n’ime gị, ka you nwere ike bụrụ onye otu na-arụ ọrụ n’ime Kraịst, nke bụ nke ya, ya na nkume dị ndụ n’ime ụlọ nsọ ya. Onye, nke anatabeghị onyinye a nke ndụ ma bụrụ onye na-enweghị ịhụnanya n'ịhụnanya Chineke, enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na Kraịst. Ọ ga-anọpụ ya iche. Nani onye amuru site na Mo Nso nso nebe Kraist di no kwa nke ya, onye no ndu ya. Yabụ, abụla nke dị luara ,ara, kama mara na onye na-ejigideghị Kraist aka kpamkpam na ọ nweghị òkè na ya. Kraist chọsiri ike n’ebe unu nile, o nokwa n’ime izuzu n’ime unu. Ma ọ bụghị ya, e kewapụrụ ya n’ebe ị nọ, n’ihi na okwukwe nke na-esighị ike abụghị okwukwe.
Ezigbo nwanne m, fee Onye-nwe ofufe, n’ihi na Kraịst ga-ebi n’ime gị ma ọ bụrụ na inwere mmanụ nke ịhụnanya ya. Ndi nile bi n’ime Mụọ na-agba ama maka ọrụ-ebube a, n’ihi na o gosipụtara ha ọnụnọ ya n’uche ha.
Echela na Kraist na nmehie biri n’aru gi. Eweghị ike ịkpọ onye ọbụla n’anya ma hụkwa Kraịst n’anya n’otu oge. I nweghi ike ido onwe gi nye adighi ocha ma gbaghara na Mmuo Nso, n'ihi na Mmuo a na-ekwo ekworo, O na-emebikwa mmebi gi n’emeghi ebere. Akọnuche gị ahụghị izu ike ọ gwụla ma i kwupụtara mmehie gị niile, were anya mmiri chegharịa ha, were ịkpọasị kpọọ ha asị ma bibie mpako gị, na-edo onwe gị nsọ site na Kraịst, Onye mepụtara gị. Mụọ nke Chineke na-alụ ọgụ megide mmehie gị, na-edo gị nsọ kpamkpam, n'ihi na Jizọs kpọrọ gị ịdị nsọ, ọ bụghị n'adịghị ọcha.
Ọbara Kraist ga-asachapụ gị mmehie niile, ma ọ bụrụ n’ikwere na ya na nkwa ya. Ike ya ga-adị ukwuu n’adịghị ike gị. I meela uche gị, ị gọnarị onwe gị ma bie ndụ maka Chukwu. Chetanu na aru gi ga-anwu n’ihi nmehie gi, ma Mụọ nke enyere gị n’eluigwe na-adị ndụ ebighi ebi. Yabụ, anyị nwere olile-anya na-enweghị atụ, n'ihi na anyị na-eburu ndụ Chineke n'ime anyị dịka nkwa nke ebube, nke a na-ele anya ọbịbịa nke Onyenwe anyị.
Otu ike ahụ, nke rụrụ ọrụ n’ime Kraịst mgbe o siri n’ili bilite, dị ugbu a ma na-aga n’ihu onye kwere ekwe niile dị ndụ. Chineke geje ndu nke ndu ayi n’ime obibia nke ugbo abua nke Kraist. Ọ ga - apụta na igwe mmadụ a na - ekweghị ekwe nwere mkpụrụ obi nwụrụ anwụ, mgbe anyị na-ebi ndụ na amara site n’amara, n'ihi na mmụọ nke Chineke na-arụ ọrụ n'ime anyị, ọ na - apụta na otuto, ọ joyụ na ike, n'ihi na ọ bụ Chineke n'onwe ya.
EKPERE: Onyenwe anyi di ndu, anyi na-efe gi ofufe n’ihi na I nyere anyi Mmuo Nso Gi ka anyi wee bie ndu dika umu gi rue mgbe ebighi ebi, n’onye ezi omume site na onwu nke Kraist, na ijide ya. Nwee zọputara anyị ekweghi na nrụrụ aka anyị. Daalụ na ọnwụ enweghị ike ịtụ anyị mkpọrọ n'ihi na echekwara gị n’aka gị, na nkwa nke ebube gị bi n’ime anyị ka anyị wee bie ndụ dịka Ọkpara gị biri n’etiti ndị ajọ mmadụ.
Gịnị ka mmụọ nsọ nyere ndị kwere na Kraịst?
Page last modified on January 27, 2021, at 08:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)